Sellics Benchmarker: Otu esi eme akara akaụntụ mgbasa ozi Amazon gị | Martech Zone
A na-enwekarị oge anyị na-eche, dị ka ndị na-ere ahịa, ka mgbasa ozi anyị na-emefu si eme ma e jiri ya tụnyere ndị mgbasa ozi ndị ọzọ na ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ gafee otu ọwa. Emebere sistemu benchmark maka nke a - na Sellics nwere mkpesa benchmark efu zuru oke maka gị. Akaụntụ Mgbasa Ozi Amazon iji tụnyere arụmọrụ gị na ndị ọzọ.
Mgbasa Ozi Amazon
Mgbasa ozi Amazon na-enye ụzọ maka ndị ahịa iji melite visibiliti nke ndị ahịa iji chọpụta, chọgharịa, na ịzụ ahịa maka ngwaahịa na ụdị. Mgbasa ozi dijitalụ nke Amazon nwere ike ịbụ ederede, onyonyo, ma ọ bụ vidiyo ọ bụla, ma pụta ebe niile site na weebụsaịtị gaa na mgbasa ozi mmekọrịta yana ọdịnaya ọdịnaya.
Mgbasa ozi Amazon awade nnukwu nhọrọ maka mgbasa ozi, gụnyere:
Branddị nkwado - ụgwọ-kwa-pịa (CPC) mgbasa ozi na-egosipụta akara ngosi gị, isi okwu omenala, na ọtụtụ ngwaahịa. Mgbasa ozi ndị a pụtara na nsonaazụ ịzụ ahịa dị mkpa ma nyere aka mee ka ịchọta akara nke ika gị n'etiti ndị ahịa na-azụ ahịa maka ngwaahịa dịka nke gị.
Ngwaahịa Akwadoro - ego-kwa-pịa (CPC) mgbasa ozi nke na-akwalite ndepụta ngwaahịa ọ bụla na Amazon. Ngwaahịa nkwado na-enyere aka melite ọhụhụ nke ngwaahịa ọ bụla na mgbasa ozi na-egosi na nsonaazụ ọchụchọ yana na ngwaahịa ngwaahịa
Nkwado Nkwado - ihe ngosiputa ihe ngosiputara nke onwe gi nke n’enyere gi aka ime ka ahia gi na ika ya di na Amazon site n’inyere ndi ahia n’azu ahia izu ahia na Amazon.
Benchmarks Amazon Ad
Iji gafere asọmpi ahụ, ịkwesịrị ịghọta ya. Na nke a bụ ihe na-eme Sellics Benchmarker ngwá ọrụ ka mma karịa ihe ọ bụla ọzọ na ahịa: ọ ga- tinye arụmọrụ gị n'ime ọnọdụ ma nye gị nghọta ndị nwere ike ime ime ka ị bụrụ onye mgbasa ozi bara uru na Amazon. Nke Oche Benchmarker nyochaa arụmọrụ gị na Ngwaahịa Nkwado, Branddị Akwadoro, na Ngosipụta Nkwado na igosi gị kpọmkwem ebe ị na-eme nnukwu na ebe ị nwere ike imeziwanye.
Usoro nyocha benchmark dị omimi bụ:
Addị mgbasa ozi akwadoro: You na-eji usoro ziri ezi niile Amazon nwere inye? Onye obula nwere usoro ya na ohere ya puru iche. Nyochaa Ngwaahịa Ndị akwadoro, Branddị Ahịa & Ngosipụta Nkwado
Zuru ezu Oke: Ghọta ma ọ bụrụ na ị nọ na elu 20% - ma ọ bụ ala
Tulee Mgbasa ozi ọnụahịa nke ahịa (ACOS): Kedu pasent nke ire ahịa ị mere site na nkwado mgbasa ozi nkwado iji tụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi? You bukwa mgbanwe? Ghọta uru bara uru na ụdị gị
Benchmark ọnụ ahịa gị kwa Pịa (CPC) Ego ole ka ndị ọzọ na-akwụ maka otu Pịa? Mụta otu esi achọta ego zuru oke
Zụlite ọnụ ọgụgụ ịpị-site gị (CTR): Usoro mgbasa ozi gị ọ karịrị ahịa? Ọ bụrụ na ọ bụghị, mụta ka iwelie ohere nke na ịpị a click
Mee ka ọnụego mgbanwe Amazon ka mma (CVR): Olee otú ngwa ngwa ndị ahịa na-emecha kpọmkwem omume mgbe ịpị ad. Ndi ahia gi kariri ndi ozo? Muta otu esi eti aka na ahia ma mee ka ndi kwenye kwenye
Dabere na data na-anọchite anya $2.5B na ego mgbasa ozi n'ofe ngwaahịa 170,000 yana ụdị ngwaahịa 20,000, Oche Benchmarker bụ ngwá ọrụ mgbasa ozi kachasị ike na ahịa. Ma ọ bụ n'efu. Ebe ahịa ọ bụla, ụlọ ọrụ, ụyọkọ usoro gụnyere opekempe 20 ụdị pụrụ iche. Nkezi bu onu ogugu di nkpa na onu ogugu maka akuko.
Chekwaa Akaụntụ Mgbasa Ozi Amazon gị
Bido na mkpesa Sellics Benchmarker gị
Ozugbo i tinyere arịrịọ gị Akụkọ ihe mere eme nke Sellics, ị ga-enweta akụkọ n'efu n'ime awa 24. Mgbe imepere akụkọ ahụ, ị ​​ga-ahụ baajị arụmọrụ dị n'akụkụ aka nri elu na-enye gị akara akaụntụ n'ozuzu ya. Ozugbo, ị ga-enweta nkọwa zuru oke nke otu ị na-eme na ihe gị uto ikike bụ.
baajị dị iche iche na-egosipụta ọnọdụ akaụntụ gị n'ozuzu ya n'ụzọ ndị a:
Platinum: Top 10% nke ndị ọgbọ
Gold: Top 20% nke ndị ọgbọ
Silver: Top 50% nke ndị ọgbọ
Bronze: N'okpuru 50% nke ndị ọgbọ.
ND PRMỌD PR PRO: Jiri akwụkwọ ịkpọ oku maka nkata n'efu gị na otu ndị ọkachamara mgbasa ozi Amazon Sellics. Ha nwere ike inyere gị aka ịkọwa nke gị Oche Benchmarker kọọ ma ọ bụ gwa gị karịa otu ị ga-esi jiri Sellics kwalite mgbasa ozi mgbasa ozi gị.
Naanị n'okpuru ị ga-ahụ ngalaba nchịkọta, nke na-egosiputa arụmọrụ gị n'ozuzu yana kacha mma na nke kachasị njọ na-egosi arụmọrụ igodo (KPI) n'ile anya. Ị nwere ike iji bọtịnụ dị n'elu aka nri ịhọrọ ma ị ga-achọ iji ọrụ gị tụnyere akara ngosi dị mkpa ma ọ bụ arụmọrụ nke ọnwa gara aga.
Ghọta mgbanwe na KPI mgbasa ozi Amazon gị
KPI dị elu dị ka ACoS na-emetụta ọtụtụ ihe dị iche iche, ọ nwere ike isi ike ịmata ihe na-ebute mgbanwe na arụmọrụ.
Ihe eji eme ihe dị mma n'ihi na
Ị nwere ike ịhụ metrik gị niile n'otu ebe.
Ọkụ ahụ na-egosi otu ihe metrik ọ bụla n'ime KPI gị, na-enye gị ohere ịchọpụta ihe na-ebute mgbanwe ngwa ngwa.
N'ime akụkọ ngosi ngosi dị n'elu, ị nwere ike ịhụ na ACoS bilitere n'ihi na mmefu mgbasa ozi mụbara karịa ahịa mgbasa ozi. Ọzọkwa, m nwere ike ịhụ na mbelata ngbanwe ọnụego na nkezi uru n'usoro (AOV) ejidere azụ ahịa mgbasa ozi.
Gbaa mbọ hụ na ị pịa ya Mgbanwe nke ọnwa-Gafere-ọnwa Pịa bọtịnụ dị n'okpuru ebe a iji soro ọrụ gị n'ime oge.
Chọpụta ngwaahịa Amazon nwere mmetụta kachasị (nke dị mma ma ọ bụ adịghị mma)
Na Mmetụta Ọkwọ ụgbọala Analysis, ị nwere ike ịhụ ngwa ngwa nke ngwaahịa ndị na-enye aka kachasị-ma nke ọma (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ) na nke na-adịghị mma (acha ọbara ọbara) - na mgbanwe ọrụ ọnwa gị maka ọnwa maka isi KPI niile, gụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi na ACoS.
Mmetụta Ọkwọ ụgbọala Analysis ga-aza ajụjụ ndị bụ isi, dị ka:
Kedu ihe kpatara ahịa mgbasa ozi m ji rịa/belata?
Kedu ngwaahịa butere mbelata/abawanye na ACoS, ahịa mgbasa ozi?
Ebee ka CPC m mụbara n'ọnwa gara aga?
Iji nke ọ bụla n'ime eserese atọ nke ngwá ọrụ a (mmiri mmiri, osisi osisi, ma ọ bụ tebụl ngwaahịa), ị nwere ike ngwa ngwa na enweghị ike ịchọpụta ndị na-eme ihe ike gị na nnukwu ohere gị maka njikarịcha.
Nke a bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka onye mgbasa ozi ọ bụla!
Nweta miri-mmiri maka ASIN gị kacha elu
Ngalaba nyocha ngwaahịa bụ akụkụ kachasị amasị m na ngwa n'ihi na ọ na-enye gị data arụmọrụ ọkwa ASIN. Dị ka ọwara awara awara ahụ, imewe ahụ na-enyere gị aka ịme nyocha dị ike ngwa ngwa, na nke kachasị mkpa, ọ dị mfe nghọta.
Nke mbụ, ọ masịrị m iji nzacha bọtịnụ ka nzacha maka opekempe ego mmefu mgbasa ozi. N'ụzọ dị otú a, ama m na m na-ebuli ngwaahịa ndị nwere mmetụta dị ukwuu na arụmọrụ n'ozuzu ya.
Mgbe ahụ, na ngwaahịa ndị fọdụrụ, a na m ele okirikiri ndị nwere agba dị n'akụkụ KPI ka m hụ ma ha nọ n'elu ma ọ bụ n'okpuru akara akara sub-category. Usoro ntinye koodu na-arụ ọrụ dị ka ndị a:
Green: ị nọ n'elu 40% = ezigbo ọrụ
Yellow: ị nọ n'etiti 20% = ịkwesịrị imeziwanye
Red: ị nọ na ala 40% = ị nwere nnukwu ohere maka uto.
N'ihi na a na-ekpebi ACoS site na ọnụọgụ pịa-site (CTR), ọnụego ntụgharị (CVR), yana ọnụ ahịa ọ bụla (CPC), m na-achọkarị ntụpọ uhie na mgbe ahụ ntụpọ edo edo n'akụkụ CTR m, CVR, ma ọ bụ CPC, wee malite ịmalite. na-ebuli ndị nwere Ngwa nke Sellics.
Ọ bụ ezie na ịchọghị sọftụwia Sellics nweta akụkọ Sellics Benchmarker gị n'efu, M na-akwado ya! Ha nwere akpaaka na njirimara AI nke na-eji ike nke nnukwu data eme ihe niile maka gị.
Atụmatụ mkpọsa ọkwa dị elu
Ịntanetị juputara na ndụmọdụ gbasara otu esi eme ka KPI gị dị elu, mana mmadụ ole na ole ga-abanye n'ime echiche na otu ị ga-esi hazie mkpọsa mgbasa ozi gị. Ọ gwụla ma ị na-akwụ ha nnukwu ego, ya bụ.
Nke a bụ mpaghara ọzọ nke Ihe omuma nke Sellics Benchmarker na-enye uru na-enweghị atụ. Ngalaba Structure nke Akaụntụ na-enye gị nlele zuru oke nke otu esi ahazi akaụntụ gị yana jiri ya tụnyere akaụntụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ dị elu.
Ngwa a na-agbakọ metrik atọ dị iche iche: otu mgbasa ozi/mgbasa ozi, ASINs/mgbasa ozi, na mkpụrụokwu/ mkpọsa. Mgbe ahụ, ọ na-enye gị "ọkwa" dị mfe ịgụ maka nke ọ bụla. Sistemụ grading na-arụ ọrụ n'ụzọ ndị a:
odo: tulee ime mgbanwe ụfọdụ
uhie: eleghị anya ọ dị gị mkpa ịhazigharị mkpọsa gị.
Ọ gwụla ma ị bụ onye mgbasa ozi nke nwere ihe karịrị $10,000 na mgbasa ozi na-eme kwa ọnwa, ndị a bụ ụfọdụ ntuziaka izugbe nke ngwa ahụ na-akwado.
Otu mgbasa ozi/mgbasa ozi: Inwe mgbasa ozi ole na ole n'otu mkpọsa ga-enyekwu gị njikwa na mmefu ego gị.
ASIN/ Otu Mgbasa Ozi Maka ọtụtụ ndị mgbasa ozi, ihe ruru ASIN 5 mgbasa ozi maka otu mgbasa ozi ga-adị mma.
Otu isiokwu/otu mgbasa ozi: Maka ọtụtụ ndị mgbasa ozi, n'etiti mkpụrụokwu 5 na 20 kwa otu mgbasa ozi ga-arụ ọrụ kacha mma.
Usoro mgbasa ozi Amazon Deep-Dive
Maka ndị mgbasa ozi na-agba ọsọ ma ngwaahịa akwadoro yana ihe ngosi akwadoro, nmikpu miri emi nwere ike ịbụ otu n'ime akụkụ kacha mma. Akụkọ Sellics Benchmarker.
Eserese na-egosiputa nkesa mgbasa ozi m na-emefu ma e jiri ya tụnyere ụdị benchmark, ka m wee hụ ngwa ngwa ma m kwesịrị ịtụle itinye ego karịa ma ọ bụ obere na ụdị mgbasa ozi.
N'ịpịgharịa gaa na ala, ị nwere ike nweta ọkwa-ọkwa mgbasa ozi KPI na akara akara. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ “+” n'akụkụ nke ọ bụla n'ime KPI ị ga-enwe ike ịme nyocha ọkwa ASIN maka ASIN ndị ị na-akpọsa site na ngwaahịa akwadoro.
Otu akụkụ kachasị ukwuu nke Sellics Benchmarker bụ na mgbe ị debanyere aha maka akụkọ mbụ gị, ị ga-enweta akụkọ kwa ụbọchị 30 nke nwere data sitere na ọnwa gara aga. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ịga n'ihu na-ebuli ma mezie akaụntụ gị iji ruo ebumnuche mgbasa ozi Amazon gị.
Uru nke ngwá ọrụ a na-enye dị oke egwu. Nweta akụkọ Sellics Benchmarker gị n'efu taa iji were mgbasa ozi gị gaa n'ọkwa ọzọ wee merie asọmpi ahụ.
Ngọnarị: Abụ m mmekọ nke Sellics.
Tags: mgbasa ozi amazonSpdị Ahịa Nkwado AmazonAhịa Ngwaahịa Amazonahịa